တို့ ဘိုး ဘွား များ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆောင်းယွန်းလ "ဒီကဗျာကို အချိန်နဲ့ရေးခဲ့တယ်"
ဖိုးဇီးရိုး - သင်္ကြန် ၁၃၇၆
အောင်ဘညို - ပြည်တွင်းရေး
မင်းညွန့်လှိုင် - အသံဗေဒ
တို့ ဘိုး ဘွား များ
မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၁၂
ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း နေခဲ့ကြရ …
PH မကွဲပြားတဲ့ သောက်ရေကြည်
ဆက်တင်မလိုတဲ့ တိုင်းရွှေပြည် …
တရွေ့ရွေ့ တလှမ်းချင်း တက်နေရ ….
သတိကြီးကြီး ခရီးနှင်နေရ …
လောကဓံတရားတွေ လမ်းသင့်ရာ …..
မရဲတရဲ နှိပ်ကြည့်နေတဲ့လက်များ …….
တဘ၀လုံး ကျွမ်းဝင်ခဲ့သော ဂျပန်ဖိနပ်များ…
တစ်ဘ၀လုံး မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးသော ဂျပန်လုပ်မော်တော်ကားများ …
ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ချိတ်ဆက်နေသော လှိုင်းတိုရေဒီယိုသံများ …
ပြန်မလာနိုင်ကြတဲ့ ရင်နှစ်သည်းခြာများ ….
အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့ သားတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်၊
သေးသေးလေးတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဗျာ” တဲ့….။
(ခင်ဗျားတို့ကို ဘေးမသီရန်မခဖို့ ဆုတောင်းရင်း )